မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ – Everybody Read TChen
Category: မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ
သူ့ဘလောခ် ကို သွားကြည့်တယ်
တလောက သူ့စာတွေကို စုပြီး ပီဒီအက်ဖ် လုပ်ထားပေးလို့သာတော်တော့တယ်
ပျက်အစဉ် ပြင် ခဏခဏ ဖြစ်နေပုံရတယ်
ဘလောခ် နဲ့ဒီကောင်မလေး အကျိုးမပေးဘူး
ဘလောခ်ရေးသက် ၃ နှစ် ရှိလောက်ရောပေါ့ (တီ့ထက်စောတယ်)
ဘလောခ် ကလဲ များတယ်
ဒေါ့ မြန်မာ ဂျီးနီးယပ်စ်
စသဖြင့် သူ့မှာ များပဲများလွန်းလှတယ်
ခုတော့လဲ ဖဘ ထဲတဝဲလည်လည်
ဘာလိုလိုနဲ့ ခင်တာ နှစ်နှစ်ရှိပြီထင်တယ်
ဓါတ်ပုံတွေ လျောက်ရိုက်ကြတာ သတိရတယ်
Posted on March 15, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ1 Comment on ဟပ်ပီးဘတ်ဒေး နန်းညီ
၂၆ သြဂုတ် တွင်ကျရောက်သော
Posted on August 26, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများLeaveacomment on ကျွန်းတကျွန်းရဲ့ သက်တမ်း
Happy Birthday to you……………………
simple but the most passionate
intimate from the bottom of my heart
Posted on July 21, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ5 Comments on 22 nd july 2009
Remembrance for his 44th Birthday
From the deepest bottom of my heart
I dedicated this poem to my “role model”
For all the effort he makes for all of us
For me, for us, he is “a living inspiration” .
Posted on July 1, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ1 Comment on ခြင်္သေ့ကြီး ရဲ့ အားမာန်
Posted on May 14, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ29 Comments on ထာဝရ ကြယ်စင်
(အဲဒီအချိန်တုံးက တီ တို့ ပေါင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ က တအုပ်ကြီး အယောက် ၂၀ လောက်ရှိတာ ပျော်စရာကြီး ရှုပ်လဲတော်တော်ရှုပ်ကြတာပတ်ပြီးတော့လေ။ ဒီလိုဒီလို ပြောပြမယ် ဥပမာပေါ့…. သူက သူမ ကိုချစ်၊ သူမ က သူမဟုတ်တဲ့ နောက်တယောက် ကိုချစ်၊ သူကလဲ နောက်ထပ် သူမ ကိုချစ်၊ သူနဲ့ သူမနဲ့ က ချစ်သလိုလိုဖြစ် အဲလိုအဲလို။
ကဲကဲ အဲလိုလေးတွေ အမှတ်တရ ရှိခဲ့တဲ့ အခုတော့ သူက လင်ကောင်းသားကောင်းနဲ့ အိမ်ထောင်တွေဘာတွေ ကျပြီး ဘ၀ က ဂိမ်းအိုဗာ (အဲလေ……………………………… အပျို ဘ၀ပြောပါတယ်) သွားပြီပေါ့လေ။ ခုတော့ ၂၈ ဧပရယ် ၂၀၀၉ မှာကျရောက်တဲ့ မမယူရဲ့မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရ ကဗျာလေး တီချမ်းကရေးပေးတာပေါ့လေ။ အသက်ကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ့လေနော်။ ပုံကတော့ တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ နည်းနည်းတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပြင်ထားတယ် (touched) ပေါ့။
Posted on May 3, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ14 Comments on စောယူရီဂဲလာ ရိုးမြူးလက် စမိ(သ်)ဒွန်း